Raygba Tower, Jụrụ Tower, Air iyuzucha ikuku mmiri Fan - Lvran
Anyị na-enye akụrụngwa dị elu.
Main lekwasịrị Ngwaahịa
Direct engagement aro akwagharị Centrifugal Fan ...
CQC asambodo ngwaahịa na-anwale ule nke onye ofufe ahụ na-agbaso ụkpụrụ mba GB19761-2009. Ngwa ofufe nwere ike ịgba ọsọ oge niile maka awa 24 na-enweghị mmebi, nwere ogologo ndụ ọrụ, na-echekwa ike ma na-arụ ọrụ nke ọma, na otu akụkụ ahụ na-enwe nrụgide kọmputa na nyocha nje iji melite ike nhazi. Mfe mmezi ọrụ The ojiji nke ihe mmanụ bath nchọ mmanụ tank echebe biarin na aro isi si corrosive gas, prolongs ọrụ ndụ, r ...
Amonia Absorption Scrubber N'ihi Industrial Wast ...
Pee Industrial Wet Scrubber For Acid Mist Cleaning Equipment basic: Maka ọgwụgwọ gas na-emebi emebi (dịka acid, gas alkaline gas), nhọrọ akụrụngwa nke nhicha bụ isi ihe iji mmiri mmiri iji banye gas. Ka ọ dị ugbu a, ụlọ ọrụ anyị ejirila aka ha wee mepụta usoro mkpochapu gas na alkaline na akụrụngwa yana arụmọrụ dị elu, arụmọrụ na njikwa dị mfe, na ndụ ọrụ ogologo. Ihe nka na ngwaahịa a nwere ihe di mfe, ...
Anticorrosion ala okpomọkụ na-eguzogide Wet Sc ...
Dị ka na-arịgo iyuzucha gas na-agbadata absorbent na-na mgbe nile na kọntaktị na mbukota oyi akwa, ịta nke solute na-arịgo airflow na-na-ala na ala, na mgbe ọ esịmde n'elu ụlọ elu, ọ ruru ndị absorption chọrọ na-atara pụọ n'ụlọ elu ahụ. N'aka nke ọzọ, ịta ahụhụ nke onye na-ajụ ase na mmiri mmiri na-arị elu na-arị elu, na usoro usoro a na-ezute mgbe ọ rutere na ala nke ụlọ elu ahụ, ọ bụ disch ...
Hangzhou Lvran Environmental Protection Group Co., Ltd.nke ọkachamara na ịmepụta Gas Disposal Equipments na ngwaahịa ndị metụtara ya dị ka Scrubber Air, Nrụpụta Carbon Arụ Ọrụ, UV Photocatalyst Equipment, Dust Collector, Ducts, Centrifugal Fans, Impellers, Electrolytic Cell, Electroplating Bath, Gas-collecting Hood etc. for over 10 afọ. Anyị nwere ụlọ ọrụ nrụpụta 4 iji kwado nrụpụta anyị nke ọma.
Hangzhou Lvran Environmental Protection Group Co., Ltd. e guzobere na 2007. Mgbe ihe karịrị afọ 10 nke mmepe, ọ na-na idé azụ enterprise nke ofufe mmepụta na East China. Ugbu a, Hangzhou Lvran, Huaian Lvran, Changzhou Lvran, Huzhou Lvran, anọ kpam kpam-ownedsubsidiaries e guzobere otu otu, anyị ụlọ ọrụ na-ekpuchi ebe ndị 15,000 square mita, fọrọ nke nta 300 ọrụ, kwa afọ ahịa nke fọrọ nke nta 60 nde yuan. Companylọ ọrụ anyị nwere ọtụtụ ikike nchọpụta akara eji arụ ọrụ, ihe eji emepụta ihe.
IHE OMUME & EGOSI OKWU
Nnukwu nrụgide Centrifugal Fan, Single Inlet Centrifugal Fan, Iyuzucha Fan, Radial Agụba Centrifugal Fan, Centrifugal duct Fan, Anu ulo Scrubber,